चीन उच्च गुणस्तर ध्वनिक पीईटी प्यानल निर्माता र आपूर्तिकर्ता - Soundbetter
घर > उत्पादनहरू > PET फिल्ट प्यानलहरू > ध्वनिक प्यानलहरू महसुस गरियो > ध्वनिक पीईटी फिल्ट प्यानलहरू
होलसेलमा स्वागत छ र हाम्रो कारखानाबाट अनुकूलित ध्वनिक पीईटी फेल्ट प्यानलहरू किन्नुहोस्। तपाईलाई हाम्रो कारखानामा नवीनतम बिक्री, नयाँ, सस्तो, फेसन र उच्च गुणस्तरको ध्वनिक PET फेल्ट प्यानलहरू किन्न स्वागत छ। तपाईं हामीबाट छुट उत्पादन किन्न आश्वस्त आराम गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईसँग सहयोग गर्न तत्पर छौं, यदि तपाई थप जान्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईले हामीलाई अब परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ, हामी तपाईलाई समयमै जवाफ दिनेछौं!
Soundbetter ध्वनिक पीईटी फिल्ट प्यानलहरू ठूला अफिस स्पेसहरू वा आवासीय लफ्टहरूका लागि उपयुक्त मिल्दोजुल्दो हो जसमा प्राय: यो समस्या हुन्छ। पर्खाल र छतमा ध्वनिक प्यानलहरू राख्नु भनेको कुनै पनि कोठामा प्रतिध्वनि हटाउन र समग्र परिवेशको आवाज कम गर्ने उत्तम तरिका हो।
397mm * 344mm, 300mm *260mm वा अनुकूल आकार
ध्वनिक पीईटी फेल्ट प्यानलहरू 100% पलिएस्टरबाट, सुई पंचिंग प्रशोधनद्वारा बनाइन्छ। उत्पादन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा भौतिक र पर्यावरण अनुकूल छ, कुनै फोहोर पानी, उत्सर्जन, फोहोर,। कुनै टाँसेको छैन, ध्वनिक प्यानलको छिद्रपूर्ण प्रकृतिले यसलाई गैर-विषाक्त, गैर-एलर्जेनिक, गैर-इरिटेन्टका सुविधाहरू सहित ध्वनि शोषक र थर्मल इन्सुलेटिभ बनाउँछ र यसमा फॉर्मल्डिहाइड बाइन्डरहरू हुँदैन र उच्च NRC: ०.८५ छ।
किन ध्वनिक पीईटी प्यानलहरू लाग्यो?
सुई-पञ्चिङको साथ, ध्वनिक PET फेल्ट प्यानलहरूमा धेरै स-साना प्वालहरू छन्, जसले PET ध्वनिक प्यानललाई शोर कम गर्न र ध्वनिलाई राम्रो, ठाउँ शान्त बनाउन उत्कृष्ट ध्वनिक उत्पादन बनाउँछ।
हट ट्याग: ध्वनिक पीईटी फेल्ट प्यानल, चीन, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, थोक, किन्नुहोस्, स्टकमा, थोक, अनुकूलित